XOG Iran Iyo Turkiga oo Ku Dhawaaqay Iskaashi Military oo Ka Dhan Ah Israel,Iran Aargudashada Israel - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalXOG Iran Iyo Turkiga oo Ku Dhawaaqay Iskaashi Military oo Ka Dhan Ah Israel,Iran Aargudashada Israel
Madaxweynayaasha Turkiga iyo Iiraan ayaa fiidnimadii Khamiista wada-hadal qadka taleefanka ah Ku Yeeshay ,Waxayna Uga wada Hadleen xoojinta xiriirka labada dhinac, horumaradii ugu dambeeyay ee gobolka, iyo isbeddelada siyaasadeed ee soo socda ee Mareykanka
Madaxweynaha Iran Hassan Rouhani ayaa u xaqiijiyay dhigiisa Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, in Iran ay ka aargudan doonto waqtigii loogu talagalay gacan ku dhiiglayaashii saynisyahankii Nukliyeerka Fakhrizadeh, oo Jimcihii la soo dhaafay lagu dilay meel u dhaw caasimada Tehran.
Iran waxay ku eedeeysaa Israel iyo dowladaha inay ku lug leeyihiin dilkii Zadeh, oo lagu tilmaamo inuu yahay aabaha barnaamijka nukliyeerka Iran.
“Waan ognahay cidda dishay Fakhrizadeh iyadoo loo marayo qaabkii loo adeegsaday dilka,” ayuu yiri Rouhani intii uu wicitaanku socday.
Wuxuu carrabka ku adkeeyay in dilka Zadeh uu yahay “dambi weyn iyo fal bani’aadamnimada ka baxsan, Tehran-na ay uga jawaabi doonto si ku habboon.”
Dhanka barnaamijka nukliyeerka Iran, Rouhani wuxuu yiri, “Haddii maamulka Biden u hogaansamo heshiiska niyukleerka, Iran waxay diyaar u tahay inay gudato waajibaadkeeda.”
Waxaa xusid mudan in Rouhani uu ka shaqeynayo diyaarinta jawiga siyaasadeed ee Iran si ay ula fahmaan maamulka cusub ee Mareykanka, oo howshooda la wareegi doona 20-ka Janaayo ee soo socota.
Madaxweynaha Turkiga ayaa dhankiisa cambaareeyay dilka Fakhrizadeh, wuxuuna sheegay in Ankara ay u aragto fal argagaxiso oo aad u xun oo loola dan leeyahay nabada iyo xasiloonida gobolka.
Erdogan ayaa yiri, “Dhamaan qorshayaasha la doonayo in lagu khalkhal geliyo xasiloonida gobolka way fashilmi doonaan markale.”
Erdogan Ayaa Muujiyey rajadiisa ah in imaatinka Joe Biden ee Aqalka Cad ay beddeli doonto siyaasadda Mareykanka ee ku wajahanGobolka Gaar Ahaan In La sameeyo iskaashiga iyo wax ka qabashada halkii ay ka ahaan lahayd hanjabaadaha iyo cunaqabateynta
Madaxweynaha Turkiga oo ka hadlaya xaalada gobolka Karabakh wuxuu yidhi “nabada iyo xasiloonida Karabakh waxay faaiido u tahay wadamada gobolka oo ay ku jirto Armenia.”
Erdogan wuxuu carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in laga fogaado tallaabo kasta oo khatar ku ah midnimada dhuleed iyo madaxbannaanida Azerbaijan.
Marka la eego, Rouhani wuxuu carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in la wajaho saameynta argagixisada ee gobolka, ka dib xiisadii Karabakh.
Wakaaladda Anadolu Agency ayaa ku warantay in labada madaxweyne ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal iyo horumarka gobolka.
Ka Hor wada hadalka Madaxweynayaasha Turkiga iyo Iran ee Khamiista ,Mahmoud Vaezi, Madaxa Shaqaalaha ee xafiiska madaxweynaha Iran, ayaa bogaadiyay xiriirka Iran iyo Turkiga inay yihiin laba saaxiib iyo deris, isagoo ku baaqay in la sii horumariyo iskaashiga dhaqaale ee labada dhinac.
Wadahadal khadka taleefanka ah oo khamiistii Ay yeesheen wasiirka cusub ee maaliyada Turkiga Lutfi Elvan, iyo Dhigiisa Iran Vaezi ayaa ugu hambalyeeyay Wasiirka Maaliyada Turkiga jagadiisa cusub wuxuuna rajo ka muujiyay in wada shaqeynta Tehran iyo Ankara ay sii socon doonto isla markaana sii horumarin doonto inta lagu guda jiro mudadan.
Vaezi Ayaa Hoosta Ka Xariiqay sida loogu baahan yahay balaarinta iyo xoojinta xiriirka dhaqaale iyo iskaashiga ganacsiga iyo isdhaafsiga badeecadaha u dhexeeya Iran iyo Turkiga.
“Marka la eego xaaladaha cusub ee caalamiga ah lagana saaro caqabadaha hortaagan iskaashiga ganacsi ee u dhexeeya dalalka, labada dowladood waxay sii xoojin karaan xiriirkooda,” ayuu yiri.
Iyadoo la tixgelinayo doorka wax ku oolka ah ee ay leeyihiin shirkadaha gaarka loo leeyahay ee Iiraan iyo Turkiga ee kor u qaadista xiriirka ganacsi ee labada dal, waxaa lagama maarmaan ah in labadaba ay sii taageeraan maalgashiga shirkadaha gaarka loo leeyahay, ayuu sii raaciyey sarkaalka Iran.
Vaezi waxa kale oo uu Iftiimiyey ahmiyada ay leedahay doorka weyn ee ay ka qaateen gudiyada wadajirka ah ee dhaqaalaha labada wadan ee hagaajinta xidhiidhka ganacsiga, iyadoo leh, “Iyada oo la dadaalayo Gudiga Wadajirka ah ee Dhaqaalaha, xidhiidhka Iran iyo Turkiga ayaa noqon kara waana inuu noqdaa mid lagu daydo xiriirka ka dhexeeya. laba deris iyo saaxiibo gobolka ah. ”
Wasiirka Turkiga ayaa isna dhankiisa ku tilmaamay Iran saaxiib iyo deris Iran, isagoo bogaadiyay xiriirka soo koraya ee labada dhinac.
Wuxuu sheegay inuu ku dadaali doono inta uu xafiiska joogo inuu sii xoojiyo xiriirka ganacsi ee uu la leeyahay Iran, gaar ahaan hadda oo sababaha loo diyaariyey iyadoo la tixgelinayo isbedelka xaaladaha caalamiga ah.
Elvan waxa kale oo uu rajo ka muujiyey in mar haddii cudurka coronavirus-ka uu dhammaado, Iiraan iyo Turkiga ay awoodi doonaan inay si dhakhso leh u soo celiyaan is-weydaarsigooda xagga dhulka iyo hawada, si ay uga faa’iideystaan ​​dhammaan awoodaha jira.
Wadahadaladan ayaa imanaya iyadoo dhaq dhaqaaq siyaasadeed uu ka socdo gobolka ka hor inta uusan maamulka cusub ee Mareykanka la wareegin howlahooda.
Mar sii horeysay, Madaxweynaha Iran Hassan Rouhani wuxuu ugu yeeray dhaqdhaqaaqa muxaafidka ah ee dalkiisa inay gaabiyaan oo aysan ku deg degin qaadashada go’aan kasta oo la xiriira barnaamijka nukliyeerka.
Maalintii Khamiista, Wasiirka Arimaha Dibada ee Iran Mohammad Javad Zarif wuxuu ku booriyay Mareykanka inay muujiyaan niyad wanaag ku noqoshada heshiiskii Nukliyeerka ee 2015 kaasoo Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ka baxay 2018.
Wuxuu intaa ku daray in haddii Mareykanku ixtiraamo ballanqaadkiisii ​​asalka ahaa, Tehran waxay ku laaban doontaa fulinta buuxda ee heshiiska.
XOG Qatar iyo Sucuudiga Guul weyn Ku Dhawaaqay Soo Celin Xiriirkoodi saacado Gudahood Imaraad oo Diidey